पर्समा यी ५ मध्ये एक चीज राख्नुहोस्: कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पर्समा यी ५ मध्ये एक चीज राख्नुहोस्: कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी!
पर्समा यी ५ मध्ये एक चीज राख्नुहोस्: कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी!
धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला र ? जसको लागि मानिसहरू कडा मेहेनत गर्न पछि हट्दैनन । तर लाखैा कोशिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन ।समुद्र शास्त्रमा यो बताइएको छ कि केही खास चीज यदि गोजीमा राख्नाले धन सम्पति टिकाउ हुने गर्दछ। यी पाँच चीजहरू गोजीमा राख्नाले तपाइको गोजी कहिले खाली हुने छैन।
यो पनि पढ्नु होस:-घरमा नराख्नुहोस् यी ७ चीज, आउन सक्छ आर्थिक संकट,
वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा कुन ठाउँमा के कुरा राख्ने नियमको पालना गर्दा सुखसमृद्धि प्राप्त हुन्छ । वास्तु पालन नगर्दा भने स्वास्थ्य र धनहानिका अलावा अन्य धेरै समस्याबाट ग्रस्त भइन्छ ।खराब भएको र टुटेफुटेको सामान घरको कुनामा राख्ने बानी हुन्छ कसैकसैको । पछि फ्याँकौंला नि भनेर कुनामा यसरी फुटेका चीज राख्दा घरमा दरिद्रता आउँछ भनी वास्तुले बताएको छ । यस्ता चीज राख्दा घरमा विराजमान महालक्ष्मी देवी पनि अप्रसन्न हुनुहुन्छ ।
तपाईंले फुटेका गिलास र प्लेटले काम चलाइरहनुभएको छ भने वास्तुदोष निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ । यस्ता चीजलाई घरमा राख्नै हुँदैन किनकि यिनीहरूको नराम्रो प्रभाव पर्छ । घरकी महालक्ष्मी रिसाउने कारण बन्छ ।
घरमा सुख र शान्ति चाहनुहुन्छ भने भाँ’चिएको पलङ नराख्नुस् । वास्तुशास्त्र अनुसार भाँचि’एको खाट घरमा राख्दा वैवाहिक जीवनमा कलह आउँछ ।
बन्द भएको घडीले रोकिएको प्रगतिलाई जनाउँछ । घरमा ठूलठूला घडी राख्दा प्रगति हुन्छ अनि घडी बन्द हुनेबित्तिकै ब्याट्री फेर्नुस् वा पूरै बि’ग्रिएको छ भने फ्याँक्नुस् । रोकिएको घडीले घरमा कुशलमंगललाई पनि रोकिदिन्छ ।
वास्तुका अनुसार फुटेको ऐना वा शीशा घरमा राख्दा लगातार नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ । यसले गर्दा परिवारका सदस्यहरूका बीच मान’सिक त’नाव उत्पन्न हुन्छ ।
तपाईंको घरको मूल ढोका भाँ’चिएको छ भने छिट्टै मर्मत गरिहाल्नुस् । भाँ’चिएको ढोका अत्यन्तै अशुभ हुन्छ र यसबाट संसारका सबै नकारात्मक शक्ति घरमा पस्छन् ।
फु’टेको तस्वीरले वास्तुदोष उत्पन्न गर्छ । घरका सदस्यको दुर्भाग्यको यो कारण बन्न पुग्छ ।
घरको फर्निचर राम्रो हालतमा हुनुपर्छ । फु’टेको फर्निचर राख्दा वास्तुदोष लाग्छ । यसबाट घरमा आर्थिक स’मस्या उत्पन्न हुन्छ । कि छिट्टै मर्मत गर्नुस्, कि फ्याँक्नुस् भाँचिएको फर्निचर ।टुटेफुटेका वस्तु घरमा साँचेर राख्दा बेकारमा वास्तु बि’ग्रन्छ । त्यसैले यस्ता सामान घरबाट हटाइहाल्नुस्।